TTSweet: ဂျူဂျူလေးရဲ့ ဟောလီးဒေး Activities
Posted by T T Sweet at 2:46 PM
Leo January 30, 2012 at 2:58 PM
ဂျူဂျူလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ပိုချောလာတယ်နော်။(အောက်ဆုံးပုံမှလွဲပီး ဦးမောင်ခြိမ့်ဝတ်ထားသည်မှာ အနီရောင်များသာဖြစ်ပါကြောင်း အရင်ပိုစ့်ဟောင်းကို အတည်ပြုသွားပါသည်။)
Mon Petit Avatar January 30, 2012 at 3:22 PM
Thank you so much for sharing those joyful time with us Ma Ma.
susu January 30, 2012 at 4:25 PM
အင်း....နာထင်တယ်..မီနီကူးပါးဝယ်မ‌ပေးလို့ဦး‌မောင်ရှိမ့်‌တော့ပညာပြခံရပြီထင်ပါ့..Blue Mountain ‌ပေါ်ကတွန်းချလိုက်တဲ့ပုံဘဲ...XD
ဂျူဂျူလေးခရုကောက်နေတာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ အန်တီအိုင်အိုရာသာအနားမှာရှိရင် အတင်းဖက်ထားလိုက်မှာလို့ စလုိုက်ပါ။း)
T T Sweet January 30, 2012 at 4:50 PM
၀ူးမောင်ရှိမ့် မီနီကူးပါး ၀ယ်ပေးရမစိုးလို့ သွေးတက်ပြီး မူးလဲသွားတာဂျ။ သများ ဘာဆို ဘာမှ လဲ မဘာလိုက်ရပါဘူး ... အဲလေ ပညာမပြလိုက်ရပါဘူးဂျာ... ပူဆာရုံလေးပူဆာတာကိုများ ...း)
အိုင်အိုရာ ... နောက်မှ ဖြစ်ကြောင်းရယ်တဲ့ကုန်စင် another တစ်ပုဒ်တင်ပေးပါဦးမည်။
လီယိုပြောမှပဲ နီညိုရောင်တွေ သတိထားမိတော့တယ်။
ခုမှပဲ ကွန့်မန့်တွေ ပြန်ရေးနိူင်တယ်။ အန်တီဆွိအရင်ကတော့ တကယ့်ကို အလုပ်တွေရှူပ်နေလို့ ကွန့်မန့်တွေလဲ ပြန်မရေးနိူင်ဘူး။ လာဖတ်သူအားလုံး ကျေးဇူးပါနော်။
mstint January 30, 2012 at 6:42 PM
Happy Belated Birthday Ju Ju !!! on 17th Dec: 2011.
အဲဒီနေ့ကတီတင့်ရဲ့ တတိယမြောက်ညီမလေး Roseရဲ့မွေးနေ့ပဲဆွိတီရေ။
ဘေဘီ January 30, 2012 at 9:43 PM
ပျော်စရာကြီးနော် မီနီဆွိလေးက ပိုချစ်စရာကောင်းတယ်း)
မျက်မှန်လေးနဲ့လေ။ ကမ်းခြေက ပုံလေးမှာ ဂျူဂျူက အပျိုလေးကျနေတာပဲနော်း) ချစ်စရာလေ
ဦးခြိမ့်က တောင်ပေါ်မတက်နိုင်လို့ ထမ်းတင်တာလား မှတ်တယ် ဟဟး)
San San Htun January 31, 2012 at 1:50 PM
ဂျူးဂျူးလေးက အရပ်ရှည်လာတယ်..ဂျူးဂျူး ခရုကောက်နေတဲ့ပုံ၊ သားအမိနှစ်ယောက် တောလမ်းလေးမှာ ရပ်နေတဲ့ပုံ၊ ပစ်ကနစ်ထွက်တာကို အဝေးက လှမ်းရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို ကြိုက်တယ် တီဆွိ...
phomu February 2, 2012 at 11:10 PM
ဓါတ်ပုံတွေ လာကြည့်သွားတယ် အမရေ ပျော်စရာကြီး
Anonymous February 3, 2012 at 2:59 AM
i live in Newcastle Aunty sweet :) feel free to hit me up when you visit to Newcastle :)